Otu esi ehicha ma chekwaa ohere na gam akporo gi | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi ehicha ma chekwaa ohere na gam akporo gi
Jordi Gimenez | | Nkuzi
Oge a ka anyị ga ahụ ụfọdụ ihe anyị ga - eme iji hichaa ma nweta ohere na ngwaọrụ gam akporo anyị. O nwere ike ịbụ na afọ a SM Los Reyes Magos ewetaghị anyị ọhụụ ọhụụ na-eche na nke anyị dị mma yana na naanị nhicha izugbe anyị nwere ike ịtụfu ya ruo nwa oge.
Ọfọn, na ikpe anyị ga-ahapụrụ gị usoro nke nhọrọ ị nwere ike ịme na ngwaọrụ gam akporo gị nke mere na ọ nwere nzaghachi ka mma na ọrụ ndị ahụ, ọ dị ọcha karịa karịa ihe niile ọ na-enye anyị ohere inweta ohere. Obi abụọ adịghị ya, afọ a 2020 nwere ike ịbụ oge dị mma iji gbanwee ngwaọrụ ahụ ka nke a mere na anyị ga-ahụ obere aghụghọ iji hichaa ngwaọrụ anyị ugbu a.
Otu esi echekwa ihe ndabere WhatsApp gi tupu ha ehichapụ ha
Tupu ịmalite ahịa ọ dị ezigbo mkpa ka anyị mepụta a ndabere nke anyị dum ngwaọrụ. Ee, anyị maara na ọ bụ nzọụkwụ ọ na-enweghị onye nwere mmasị ịrụ ebe ọ bụ na ọ chọrọ obere oge, ọ bụ ezie na anyị na-ekwukarị na ọ dị mkpa iji nkeji ole na ole ma ọ bụ ọbụlagodi awa iji mee nkwado ndabere nke ama anyị, karịa ka emechara akwa ụta maka ọnwụ data, foto, akwụkwọ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na anyị ehichapụ ọdịnaya nke gam akporo anyị, ọ ga-esi ike ịgbake ya, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na anyị enweghị nkwado ndabere, yabụ tupu ịmalite ihichapụ ihe ọ bụla na-ewe obere oge iji kwado ndabere ekwentị niile.
1 Hichapụ foto ị nwere na ekwentị gị
2 Ngwa anyị anaghịzi eji
3 Foto, vidiyo, WhatsApp memes
4 Hichapụ ihe nkiri ma ọ bụ usoro nke ị hụburu
5 M na-etinye ngwa iji hichaa ngwaọrụ ahụ?
6 Iweghachi usoro nwere ike ịbụ oke ngwọta
Hichapụ foto ị nwere na ekwentị gị
Dị ka oge niile, anyị ga-agbago nzọụkwụ site na nzọụkwụ na ihe mbụ bụ ihe kachasị mfe na ihe kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsị anya n'etiti ndị ọrụ, nke dị ka aha aha ahụ, ihichapụ foto anyị nwere na ngwaọrụ n'onwe ya. Nke a bụ usoro kachasị nwayọ nwayọ kemgbe anyị ga-aga otu otu na-ahọpụta ndị ahụ onyogho ndị ọzọ anyị na-achọghịzi ma ọ bụ nke mechara bụrụ ihe ọjọọ n'oge na-eme ha ma ọ bụ ọbụna ndị niile nseta ihuenyo na-agbakọta wee gosipụta ya.
Anyị nwere ike iji ngwa ọ bụla dị iji kpochapụ onyonyo abụọ, mana anyị anaghị adụ ya ọdụ ebe ọ nwere ike ime ka ihe nwere ụdị oyiyi dị mgbagwoju anya, yabụ ndụmọdụ kachasị mma iji metụ gallery nke gam akporo anyị aka bụ ime ya. aka ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịlafu oge na ya.
Kọmputa m nwayọ nwayọ Kedu ka m ga-esi mezie ya?
Ngwa anyị anaghịzi eji
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nhọrọ nke abụọ ma ọ bụ nke mbụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Na ọnụ ọgụgụ nke ngwa anyị gbakọtara na gam akporo anyị na nke anyị na-ejighị ọ na-aba ụba na ụbọchị na-agafe na ọtụtụ n'ime ha anyị na-ebudata ha wee chefuo na ha arụnyere, yabụ ọ bụ oge dị mma iji mechaa nhicha ha.
Oghere nke ngwa ndị a niile dị na ngwaọrụ a na-adịkarị ka nke foto ahụ, yabụ na ọ bụghị ọrụ anyị ga-ahapụ maka nke ikpeazụ, tere aka ya, anyị nwedịrị ike ịsị na nke a ga - abụ nhọrọ mbụ ma ọ bụ nke abụọ mgbe ihichapụ foto na vidiyo site na gam akporo. Oghere ohere ahụ ga-eto nke ọma na omume abụọ a, ugbu a, anyị nwere ike ịga n'ihu na ọrụ ndị ọzọ.
Foto, vidiyo, WhatsApp memes
Mgbe ndị otu gwụchara, ọ bụ ihe dị mma maka ọtụtụ memes na bullshit ka ha na-agbakọ na ngwa ngwa ozi a. Nke a bụ ihe ọzọ dị mkpa nzọụkwụ iji gaa na akaụntụ iji nweta ohere na anyị gam akporo na ọ bụ na "ulo oru quantities" nke foto, vidiyo, Gif, memes, vidiyo na ndị ọzọ bullshit na ngwa izipu ozi WhatsApp.
Anyị nwere ike wepu ihe a niile na ngwa n'onwe ya, mana nke mbụ anyị nwere ike ịchekwa ụfọdụ foto ma ọ bụ ọdịnaya na anyị chọrọ kpọmkwem site na WhatsApp, anyị na-ahụ ihe dị ma anyị na-edebe ihe anyị chọrọ. Ozugbo emechara nke a, anyị nwere ike ihichapụ folda niile, ee, hichapụ folda ahụ kpamkpam na njikwa faili kachasị amasị gị ma ọ bụ ozugbo na gallery n'onwe ya.
N'oge a ọ dị mkpa ịsị na anyị nwere ike ịgwa WhatsApp ka ọ ghara ịchekwa ihe anyị na-ebudata na ya, anyị ga-enweta Ntọala> Data na nchekwa ma lelee nhọrọ ka ị ghara ịchekwa ọdịnaya ahụ na akpaghị akaNaanị ihe anyị ga-eme bụ iji aka anyị mee ya mgbe anyị chọrọ ịchekwa ihe ezitere anyị.
Hichapụ ihe nkiri ma ọ bụ usoro nke ị hụburu
Otu ihe ọzọ ị ga-ebu n'uche mgbe anyị na-eji ụdị Netflix ụdị nke na-enye anyị ohere ibudata fim ma ọ bụ usoro inwe ike ịhụ ha n’enweghị njikọ isntanetị bụ ihichapụ ha ozugbo anyị hụrụ ha. Ihe ọdịnaya a niile na-ewe ọtụtụ ohere na gam akporo anyị n'agbanyeghị na anyị nwere ngwaọrụ nwere nnukwu nchekwa, anyị ga-emeju ya ma ọ bụrụ na anyị anaghị ehichapụ ihe nkiri ma ọ bụ usoro ndị a.
Ya mere, ọzọ n'echiche a dịkwa mkpa ịhapụ ọdịnaya a iji nweta ohere na ọ bụ na ihe niile a na-agbakwunye ma na nke a ha bụ ọtụtụ MB ma ọ bụ ọbụna GB nke anyị nwere ike ịhapụ ọ bụrụ na anyị nwere usoro ma ọ bụ ihe nkiri ebudatara maka mgbe anyị na-aga njem. Hichapụ ndị ị na-achọghị.
M na-etinye ngwa iji hichaa ngwaọrụ ahụ?
Nke a bụ otu n'ime ajụjụ ndị ahụ na - abịakarị anyị nso nke ukwuu ma na m, enwere m ike ikwu n'onwe m na anaghị m akwado ha ma ọlị, ọ kachasị mma iji aka mee nhicha nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụrụ na ị mee ọsọ ọsọ m nwere ike ikpochapụ cache, anyị nwere ike ihichapụ foto, vidiyo, ngwa ma mee ihe anyị kwurịtara n'isiokwu a, mana Ngwa ndị kwere nkwa ihicha ngwaọrụ anyị ọsọ ọsọ na enweghị nsogbu nwere ike bụrụ nsogbu karịa nsogbu.
May nwere ike ịnwe otu ngwa ndị a tụkwasịrị obi na gam akporo gị ma ọ na-arụ ọrụ maka gị, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe amamihe dị na ịchọ aka fọdụrụ na aka gị ma hichapụ ya ozugbo na-enweghị ngwa ndị ọzọ nke nwere ike idowe ozi anyị ehichapụ ma ọ bụ belata ngwaọrụ ọzọ. Ọ bụrụ na inwere ya ma chọọ iji ya, gaa n'ihu, ma ọ bụghị na ihichapụ ihe niile aka.
Iweghachi usoro nwere ike ịbụ oke ngwọta
Obi abụọ adịghị ya, ihe a niile dị mma iji nweta ohere na ngwaọrụ anyị mana ọ bụrụ na anyị achọpụta na anyị nọ n'ọnọdụ dị oke oke ihe anyị nwere ike ime bụ iwepụ ihe niile na ntinyeghachi akụrụngwa zuru oke. Ee, o nwere ike ịdị ka ihe mgbagwoju anya mana Orylọ ọrụ tọgharịa ngwaọrụ nwere ike melite ahụmịhe onye ọrụ Ọ bụrụ na gam akporo anyị dị njọ nke ukwuu yana nke dị n'elu anyị ejisiebeghị ike idozi nsogbu ahụ.
I nwere ike ime ihe ọ bụla ị chọrọ ma karịa ihe niile na-echeta nzọụkwụ mbụ nke bụ ndabere gị PC nwere ike na-efu efu. Chee na n'ọnọdụ niile anyị nwere ike idafu faịlụ ahụ, foto ma ọ bụ akwụkwọ ahụ anyị chọrọ mgbe anyị na-eme ụdị nhicha a, yabụ ọ dị ezigbo mkpa tupu ịgbada ọrụ iji mepụta otu ngwaọrụ anyị. Mgbe ahụ, anyị ga-ekpebi ma ị ga-ehichapụ ndabere ahụ ma ọ bụ na ị gaghị ehichapụ, mana ọbụlagodi na anyị nwere nkwado ndabere nke data naanị ma ọ bụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Otu esi ehicha ma chekwaa ohere na gam akporo gi
Esi gbanyụọ Windows Defender na Windows 10
Dell na-enye Concept UFO, "ụdị" nke Nintendo Switch